आखिर किन चीनसँग डराउँदैछ ओली सरकार ? यस्तो छ खास कारण ! – Hamrosandesh.com
आखिर किन चीनसँग डराउँदैछ ओली सरकार ? यस्तो छ खास कारण !
मंसिर,९ काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले कालापानी भारतको नयाँ नक्सामा परेपछि आपत्ति जनाएको छ । देशभर प्रदर्शन भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कालापानीबाट आफ्नो सेना हटाउन भारतलाई आग्रह समेत गरिसकेका छन् । साथै कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइने र त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बल खटाइने बताउँदै ओलीले नेपालको एक इन्च पनि जमिन नछोड्ने बताइसकेका छन् ।
जम्मू काश्मिरको नयाँ स्थितीलाई समेट्न भारतले जारी गरेको नक्सामा कालापानी परेपछि यो विवाद फेरि तातेको छ । यद्यपि भारत सरकारले नयाँ नक्सा आफ्नो सार्वभौम भूभागको स्पष्ट चित्रण भएको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । नेपालसँगको सीमाबारे नक्सामा कुनै परिवर्तन नगरिएको र वार्ताबाट नेपालसँगको सीमा विवाद समाधान गरिने पनि विदेश मन्त्रालयले बताएको छ । यसका बाबजुद पनि सत्तारुढ नेकपाकै अगुवाइमा भारतविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ ।
अर्कोतिर चीनले पनि सीमा मिचेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालको १२ ठाउँमा चीनले सीमा मिचेको छ । तर, यसबारे नेपाल सरकारले एउटा पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन । बरु नेपाली भूमि फिर्ता माग्दै चीनविरुद्ध प्रदर्शन गर्नेलाई कम्युनिस्ट सरकारले गिरफ्तार गरिरहेको छ ।
सरकारी आँकडाअनुसार तिब्बतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा कैयौं हेक्टर जमिन चिनियाँ नियन्त्रणमा छ । नेपाली भूमि रहेको अरुण खोला, कामु खोला र सुम जंग अहिले तिब्बतको तिंगिस्यान क्षेत्रमा छ ।
चीनले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोसी र खराने खोला क्षेत्रमा १० हेक्टर, हुम्लाको भदारे नदीमा ६ हेक्टर र कर्णालीमा ४ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ । तर, नेपाल सरकारले चीनविरुद्ध कुनै कारवाही अगाडि बढाएको छैन । यहाँसम्मकी सार्वजनिक रुपमा बोलेको पनि छैन । यद्यपि नेपाली भूमि अतिक्रमणको समाचार आएपछि चिनियाँ राजदूतावास उल्टै कुनै भूमि नमिलेको दाबी गरेर दादागिरी देखाएको छ । भूमि मिचिएको भए वार्ताबाट समाधान गर्छौं भन्नुको साटो चीनले उल्टै कुनै भूमि नमिचिएको भनेर फिर्ता माग्नेहरुलाई नै तर्साउन खोजेको छ । यो तर्साइमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि परेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
चीनले मिचेको भूमि माग्दै सप्तरी, बर्दिया, कपिलवस्तुमा प्रदर्शन भयो । प्रदर्शनकारीले चीनविरुद्ध नाराबाजी गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको पुत्ला जलाए । उनीहरुले गो ब्याक चाइना, नेपाली भूमि फिर्ता गर जस्ता नारा लगाएका थिए ।
केपी ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सरकार आएपछि चिनियाँ प्रभाव बढेको छ । तर, प्रभाव बढ्दैमा आफ्नो मिचिएको भूमि माग्न डराउन नहुने कुटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।
ओली सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई रेड कार्पेट नै विछ्याएको छ । तर, चीनको अवैध गतिविधिले स्थानीयलाई बढी असर गरेको छ । पीडितहरुले यसविरुद्ध आवाज उठाउँदै प्रदर्शन गर्न थालेका छन् ।
भारतको प्रतिष्ठित इकोनोमिक्स टाइम्सको रिपोर्टअनुसार नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्न चीनले कैयौ अवैध गतिविधि, प्रलोभन दिएको छ । ह्याकिंङ र डेटा चोरीलाई लिरएर बद्नाम चिनियाँ कम्पीन हुवाईले केही सरकारी वेवसाइटसहित २ सय नेपाली वेवसाइट ह्याक गरेको छ ।
केही नेपालीले त हुवाईको कार्यालयअगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले कार्यालय प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । गत अगस्टमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ४ चिनियाँ नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । उनीहरु नेपाली महिला बेचबिखन तथा तस्करीमा संलग्न थिए ।
‘उनीहरु नेपाली युवती र महिलालाई दुलहीको रुपमा तस्करी गर्दथे । हामीले विमानस्थलमा दुई नेपाली दुलहीका दुई चिनियाँ पक्राउ गर्दा उनीहरुको धन्दाबारे पर्दाफास भयो । हामीले अन्य ८ जनालाई पनि नियन्त्रणमा लियौं । ५ पीडित दुलहीको उद्धार गर्यौं’, एसएसपी ईश्वरबाबु कार्कीले बताए ।
चिनियाँ मानव तस्करहरु नेपालका ग्रामिण क्षेत्रका महिलालाई आकर्षक प्रलोभन देखाएर विवाहका लागि चीन लैजाने गर्छन् । चीनमा दुलहीका लागि लाखौं भुक्तानी गर्न पुरुषहरु लालायित हुन्छन् । किनकी उनीहरु किनिएकी दुलहीलाई बिहेको नाममा सेक्सको साधन बनाउन चाहन्छन् ।
नाफा र स्वार्थ चीनको विश्वव्यापी मान्यता हो । चीनले जहाँ पनि व्यापार र नाफालाई प्राथमिकता दिन्छ । यसैअन्तर्गत नेपालमा पनि व्यापार गर्न विभिन्न गतिविधि चीनले गरिरहेको छ । जसबाट आम नेपाली जनतालाई असर पुगेको छ । तै पनि ओलीको कम्युनिस्ट सरकार चिनियाँ कम्पनी तथा नीतिलाई संरक्षण दिइरहेको छ । नेपालमा चिनियाँ दूतावासलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ, जसको लाभ हरेक तरिकाबाट उठाइरहेको छ । कम्युनिस्ट सरकार ह्याकिङ, डेटा चोरी, दुलही तस्करी र भूमि अतिक्रमणलाई छुट दिइरहेको छ । यसबाट ओली सरकार चीनका अगाडि लाचार भएको देखिन्छ ।